Chii chinonzi Crypto Engine - Nezvedu
Yambiro: Nekuda kwekuda kwakanyanya midhiya, isu tichavhara kunyoreswa saDD / MM/YYYY - HURRY mm: ss
Nezve Crypto Engine
Chii chinonzi Crypto Engine?
Kubva zvakaunzwa zveBitcoin uye mamwe ma cryptocurrencies mumisika yezvemari ino shanduko nyowani yeasset kirasi yakaona kukura kwekuwedzera. Izvi zvakakonzera kuti vazhinji vekutanga vatengesi vave vapfumi zvakanyanya. Sezvo Bitcoin yakaburitswa kuruzhinji mukutanga kwa2009 takaona Bitcoin ichiwana yakanakisa madhora zviuru makumi maviri. Pakati pegore ra2017 Bitcoin kukosha kwakakoshesa 958.32%, kudzikisira kukoshesa mumasheya panguva imwechete iyoyo.
Neraki, nekuenderera mberi kwekutorwa kweBitcoin uye mamwe madhijitari muchirongwa chezvemari, kudiwa kwecryptocurrencies kuchawedzera zvinozoguma nemitengo yepamusoro Naizvozvo, kuchine mukana wakawanda wekuita purofiti yakakura kubva mukudyara mumisika ye cryptocurrency. Crypto Injini yekuvhuna yekutengesa software inzira inoshanda uye yakachengeteka yekushandisa uyu mukana wakakura.
Crypto Injini inokupa iwe sarudzo yekusarudza kubva kune inopfuura zana midziyo yekutengesa nayo uchishandisa software yeamberi algorithm. Zviratidzo zvedu zvekutengesa zvakahwina kurumbidzwa kwemaindasitiri uye zvakatowana mubairo wepamusoro software yekutengesa kubva kuUS Trading Association.
Bato redu revatengi rinozivikanwa seimwe yeakanakisa muindasitiri. Vamiriri vedu vane hunyanzvi uye vakagadzirira kupfuura kuwana mhinduro kune chero nyaya dzaungasangana nadzo neCrypto Injini.
Zvakare, neyedu otomatiki software uchafanirwa kuita basa diki kwazvo kuti uwane mari isingachinjiki kubva mukutengesa misika ye cryptocurrency neiyo Crypto Injini software. Nekungodzvanya kaviri chete pane mbeva unogona kuseta iyo application kune automated mode. Izvi zvinoreva kuti software ichatanga kuongorora misika yemikana inobatsira yevatengesi painomuka mumisika ye cryptocurrency.
Chikwata chiri kumashure kweCrypto Injini software chinoumbwa nevatengesi vane hunyanzvi avo vakasarudza kupa veruzhinji nzira yekutengesa iyo yaizobvumidza chero munhu kuti awane kubudirira mukutengesa Bitcoin uye nemamwe ma cryptocurrencies Nhengo yega yega yechikwata yakanga yashandira makore akati wandei kune mamwe mafemu, ichiita kuti vamwe vakawanda vave vakapfuma munzira.
Iyo Crypto Injini timu yakasangana yega yega ichienda kumusangano wezvemari. Isu takakurumidza kuona kuti tese takagovana zvakaenzana uye kushushikana mukushanda kwedu nemamwe mafemu. Ichi ndicho chikonzero takasarudza kutora zvinhu mumaoko edu uye nekubatanidza ruzivo rwedu uye ruzivo kuitira kuti tigadzire purogiramu itsva yekutengesa.
KUTANGA KUITA MARI ZVINO